သုံးသူကားအဘယ်သူကော်ဇောခြောက်သွေ့မှုန့် ... ကွယ်ပျောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ... အသင်ကော်ဇောသန့်ရှင်းရေးသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါကြိုက်တယ်, အချိန်ကြာမြင့်စွာခန်းခြောက်ကြပါဘူး။ သငျသညျအသေးကလေးများသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များရှိပါက, ထို့နောက်သင်ကော်ဇောကိုအစားထိုးရန်ရှိသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အရွယ်ရောက်လျှင်, သူတို့ကိုသတိထားကြစေ။
ကွယ်ပျောက်အပြည့်အဝ gov ဘို့အကောင်းတစ်ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ် .... တစ်ဦး။ သူကသန့်ရှင်းရေးမထားဘူး Nichrome! ငါကဒီမှာပေါ့အပေါငျးတို့သအစွန်းအထင်းကိုလျှော်-eared nyanem ကလေးများကလိုရင်းမပါဘဲချွတ်။ သူဿုံသန့်ရှင်းကော်ဇောအမှုအရာ washes
Те кто писал про амвей — ВСЕ ФИГНЯ РЕКЛАМА !! Моему ковру помог поход в хим чистку. И душ с обычнм порошком ( можно ушастого няня) на даче. Только долго сушили.
အကျွမ်းတဝင်ပထမဦးဆုံးကွယ်ပျောက်, -0 ရလဒ်ဝယ်, ထို့နောက်ဂျွန်လော့ခ် (Amway), သန့်ရှင်းတဲ့ဆေးကြော -belenky ။
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါသည်) စင်ကြယ်သောအချည်းနှီးကွယ်ပျောက်သင်သိရလိမ့်မယ်
အလင်းကော်ဇောအဘို့အ 250RUBLEY Amway လော့ကျွန်းဘက်စုံသုံးဝယ်ဖို့တိုင်ကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျ LTC နှင်တံအမြှုပ်များနှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရေမြှုပ်ဖြည့်စွက်ခြင်း, အင်တုံသို့ရေသွန်းလောင်း။ သင်က upholstered ပရိဘောဂအဖြစ်ကောင်းစွာနှင့်များစွာသော esch အားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ваниш — ГА. НО!!! чистила диванную подушку, всю зиму потом выветривала эту вонь на балконе. УЖОССС!!!! подушка стала вся в мелких грязных пятнах, те места, которые почистились, стали бледными. Буду чистить унитаз, чтобы потраченные деньги хотя бы на 2% себя отработали. производитель ООО РЕКИТТ БЕНКИЗЕР. вообще у этого производителя ничего не буду покупать
ငါကော်ဇောပေါ်အစွန်းအထင်းရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ကြီးပွဲချင်းပြီးမြှုပ်ဖို့ဖန်မိုးဖွဲဆေးကြောဘို့ကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအစွန်းအထင်းပျောက်ဆေးကြောဖို့တစ်နည်းနည်းနှင့်တစ်ဦး damp အထည်ပေါ်လာပါစို့။
ဆ ... ဒါပေမယ့်အမှုန့်နှင့်ပြည့်ဝ၏, ထိုအရည်
အစဉ်မပြတ်ငါ Fairey နှင့်ဖြီး-သီချင်းသားကိုမွေး !! ! အရာအားလုံးသည်စင်ကြယ်၏အရာနှင့်ကြီးစွာသောအနံ့
Ваниш — удивительное средство: почистил коврик — и в реанимацию с аллергией. Кто еще не пробовал — не отказывайте себе в экстриме. господа!
ရေမြှုပ်ရေတစ်ချိန်ကငါ့ကို 10 ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှပူပစုဆောင်းနေချိန်တွင်လမ်းလျှောက်, ဖုန်စုပ်စက်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဘိနပ်မပါသောပြောက်ဖြစ်လာကော်ဇော, ငါရေ filter ကိုအတူကရှိသည်။ obschm ပိုက်ဆံခုနှစ်တွင်ပြင်သို့ပစ်လိုက်ခြင်း။
Oh, ငါ့ကိုမမေး! 🙂
Больная тема — уже год ломаю голову, чем чистить ковр в съмной квартире. "Ванишем" чистила2раза, но без эффекта видимого. Возможно, я мало пены наносила.
Три дня назад почистила "Золушкой", но от души — наносила пену губкой, и даже с водой, не жалея. Кое-где трла щткой. Оставила на ночь сохнуть. Утром пропылесосила. Лучше, чем "Ванишем", ковр посветлел. Но вс равно грязный.
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,222 စက္ကန့်ကျော် Generate ။